घट्दो क्रममा सेयर बजारः चल्ला त केपी ओलीको जादु ?एक बिशेष विश्लेषण ! | CHALKHEL.COM
Home आर्थिक घट्दो क्रममा सेयर बजारः चल्ला त केपी ओलीको जादु ?एक बिशेष विश्लेषण...
घट्दो क्रममा सेयर बजारः चल्ला त केपी ओलीको जादु ?एक बिशेष विश्लेषण !
काठमाडौं ९ पुस। ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ केपी ओलीले ६ पुसमा आफूसँग भेट्न आएका सेयर ब्रोकरहरुलाई कम्युनिस्टको बदनाम गर्न बजारमा चलखेल भइरहेको बताए । यसअघि २६ कात्तिकमा झापामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कम्युनिस्ट सरकार आउँदा बजार घट्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका थिए ।
तथापि, लगानीकर्ता र ब्रोकरहरु ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिन्छन् । सामान्यतया वामपन्थी सरकार गठन हुँदा बजार घट्ने विश्लेषण हुने गरेको छ । सम्भावित प्रधानमन्त्री ओलीले सोही विश्लेषणको खण्डन गर्दै आएका छन्, चुनावी अभियानदेखि नै ।६ पुसको भेटमा उनले वाम सरकार बनेपछि स्वतः बजार बढ्ने कुरामा आश्वस्त पार्न खोजेका थिए, सेयर ब्रोकरहरुलाई । उक्त भेटका कारण आइतबारको सेयर कारोबारमा केही प्रभाव पार्न सक्ने आकलन विश्लेषकहरुको छ ।
गत साता बजारमा अर्को सकारात्मक घटना पनि भयो, एनआरएनएको लगानी प्रतिबद्धताका रुपमा । एनआरएनएका पदाधिकारीहरुले बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीसँगको भेटमा बजारमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तत्पर रहेको आश्वासन बाँडे, ७ पुसमा ।
यी दुवै घटना क्रमले बजारमा केही समय प्रभाव पार्ने सम्भावना नभएको होइन । तर, विगतका अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ, त्यो अल्पकालीन मात्र हुनेछ ।
यस्तो रह्यो गत साताको बजार
एक सातामै लगभग ५० अंक गुमाएको सेयर बजारमा अझै लगानी गर्ने समय भइनसकेको प्राविधिक विश्लेषणबाट देखिएको छ । आधारभूत पक्षले भने नेप्सेलाई केही साथ दिने सम्भावना छ ।
नेप्से परिसूचकको आरएसआई र पिभट विश्लेषणले बजारमा लगानी गर्ने आधार बन्दै गएको देखाएको छ । ‘मुभिङ एभरेज’ विश्लेषणले भने बजारमा लगानी गर्न केही समय पर्खिनुपर्ने अवस्था संकेत गरिरहेको छ ।
‘अहिले बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन्, कर्जाको व्याजदर सस्तो हुन सकेको छैन, यसले बजारको वृद्धिलाई केही प्रभाव पार्छ नै,’ एक ब्रोकरले भने ।
निक्षेपको व्याजदर बढ्दा कर्जाको व्याज पनि बढ्ने र यसको प्रभावस्वरुप बजार परिसूचक घट्ने मान्यता छ । नेपालमा पनि बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने जमात छन्, कर्जाको व्याजदर बढ्दा लगानी क्षमता घट्छ ।
तुलनात्मक रुपमा बढी सुरक्षित मानिन्छ, निक्षेप । बजारमा भन्दा राम्रो प्रतिफल पाउने भएपछि जोखिम मोल्न नचाहने लगानीकर्ताको जोड निक्षेपमा हुने गर्छ ।
असोज ०७३ यता नेप्सेले मासिक रुपमा गुमाएको अंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा दिएको मासिक व्याजदर हेर्ने हो अपवादबाहेक परस्पर विपरित नै देखिएको छ ।
‘अवस्था सहज हुँदा बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर महिनाको शुरुतिर घटाउने र केही समयपछि नै बढाउने गरेका थिए । यसले समग्रमा कुनै महिना नेप्से उच्च बढेको पनि देखियो,’ अर्का ब्रोकर भन्छन् ।
त्यसबाहेक निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र सुधार हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी भित्रिने अपेक्षामा पनि बजार बढेको उनको बुझाइ छ ।
बजारमा छोटो अवधिमा भएको उतारचढावको लाभ लगानीकर्ताले उठाउँदा कुनै समय उच्च दरमा बढ्ने र कुनै समय त्यसरी नै घट्नेसमेत भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रस्तावित लाभांशको पनि केही सकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो ।
यद्यपि, अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो नेप्सेको उच्च वृद्धिमा यसले सघाउ पुगेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुगेको र भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाइने हो भन्ने चिन्ताले पनि लगानीकर्ता अनिर्णयको अवस्थामा देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
बैंकहरुबाट जारी भएका बोनस र हकप्रद सेयर सूचीकरणसँगै बजारमा सेयर आपूर्ती बढेको तर लगानीकर्ताको संख्या र क्षमता दुवैमा वृद्धि हुन नसकेकाले पनि बजारले वृद्धिको गोरेटो समात्न नसकिरहेको हो ।
गत साता दुई करोड ६४ लाख कित्ता नयाँ सेयर बजारमा सूचीकृत भए, जसमा पाँच वटा कम्पनीका हकप्रद र बोनस सेयर छन् । दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको सेयर साँवामा किनबेच भयो । अघिल्लो साताभन्दा कारोबार रकम भने घटेको देखियो ।
शतप्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र रणनीतिक साझेदार भित्रिने खबरले नेपाल टेलिकमको सेयर कारोबार बढेको छ ।
१५ कात्तिकयताको नेप्से परिसूचकका आधारमा निकालिएको पिभट विश्लेषणले नेप्सेले आगामी १५ दिनको अवधिमा १४५० विन्दुमा पहिलो टेवा पाउने संकेत गरिरहेको छ । यसअघि पनि नेप्से १४६० र १४६९ विन्दुमा टेवा पाएर केही बढेको थियो ।
१४५० मा नेप्सेले टेवा पाउन नसकेमा १४२९ मा अर्को टेवाको सम्भावना देखिएको छ । तर, नेप्सेले धेरै वृद्धि हासिल गर्न सक्ने भने देखिँदैन । यही अवधिमा नेप्सेले १५१५ विन्दुमा प्रतिरोध पाउने सम्भावना पनि छ । नेप्सेको उच्च, न्यून र अन्तिम विन्दुको आधारमा पिभट, टेवा र प्रतिरोध विन्दुहरु पत्ता लगाउने गरिन्छ ।
यस्तै, आरएसआई विश्लेषणले बजारमा अत्यधिक बिक्रीको अवस्था रहेको संकेत गर्छ । नेप्से परिसूचकले १४ दिनमा जोडेको र गुमाएको अंकलाई आधार मानेर गरिने यो विश्लेषणले बजारमा किनबेचको चाप कस्तो छ भन्ने संकेत गर्छ ।
नेप्से परिसूचकको आरएसआई विश्लेषणले बजार ‘ओभरसोल्ड क्षेत्र’ अर्थात् अत्यधिक बिक्रीको अवस्थामा आएको संकेत गरिरहेको छ । नेप्सेको आरएसआई सूचक स्केल ३० भन्दा मुनि आएकाले बजारमा अत्यधिक बिक्रीको अवस्था रहेको संकेत पाइएको हो । आरएसआई सूचक निरन्तर घट्दो अवस्थामा देखिएकाले यसैलाई टेवा विन्दु मान्न सकिने अवस्था छैन ।
यद्यपि, स्केल ३० विन्दुभन्दा मुनि बजार रहँदा क्रमिक रुपमा सेयर खरिदारी बढाउन सकिने विश्लेषण गरिन्छ ।
सात र २१ दिने ‘सिम्पल मुभिङ एभरेज’ रेखाले एकअर्कोलाई काटेको (क्रसओभर) छ । विशेषगरी, सात दिने रेखालाई २१ दिने रेखाले हालै काटेर उकालो लागेकाले बजारमा लगानी ‘होल्ड’ गर्नु सही हुन्छ ।
सात दिने र २१ दिने रेखा एकअर्काभन्दा परतिर छन् । यी दुई रेखा नजिकिन लागेमा भने लगानी बढाउन सकिन्छ । यदि २१ दिने रेखालाई सात दिनेले काटेर माथि लागेमा लगानी बढाउन सकिन्छ ।अनलाइनखबर
Previous articleएमालेमाथि प्रचण्डको आरोपः फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने कोसिस भयो
Next articleराजधानीको सवारी जाम हटाउने कुलमान र चिरिबाबुका सूत्र